Nchọgharị | December 2019
Gini mere ị gaghị etinye ihe ntinye ndị ọzọ na Google
Nchọgharị Chrome bụ otu n'ime ihe kachasị egwu egwu na ụwa. Na nso nso a, ndị mmepe ya achọpụtawo na ndị ọrụ niile nwere ike ịnọ n'oké nsogbu, n'ihi ya, n'oge na-adịghị anya, Google ga-egbochi nrụnye nke ndọtị sitere na saịtị ndị ọzọ. Ihe kpatara njedebe ndị ọzọ nke Chrome ga-amachibido Chrome na arụmọrụ ya si na igbe ahụ dịtụ ala karịa Mozilla Firefox na ihe nchọgharị Ịntanetị ndị ọzọ.
Kedu ka esi lelee akụkọ ihe mere eme nke saịtị nleta? Esi kpochapụ akụkọ ihe mere eme na ihe nchọgharị niile?
Ezi ụbọchị. Ọ na-egosi na dịka ndị ọrụ niile maara na, site na ndabara, ihe nchọgharị ọ bụla na-echeta akụkọ ihe mere eme nke ibe ndị ị gara. Ọbụna ma ọ bụrụ na izu ole na ole gafee, na ọnwa ole na ole, site na ịmepe nchọgharị nchọgharị ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta ihuenyo ahụ (ma ọ bụrụ na, n'ezie, ị kpochapụrụ akụkọ ihe nchọgharị ahụ ...).
Ndepụta nke tinye-ons bara uru na plugins maka Mozilla Firefox na ị nwere ike ịhụ uru.
Mozilla Firefox bụ nchọgharị na-ewu ewu, nke dị mma site na nkwekọrịta na ọsọ ọrụ. Nchịkọta a nwere uru tinye-ons na nkwụnye ins, nke ị nwere ike ịgbasa usoro ihe omume. Adblock Content Adonymizers Hola, anonymoX, Browsec VPN Easy Video Downloader SaveFrom LastPass Password Manager Awesome Screenshot Plus ImTranslator Anya ibe edokọbara Popup Blocker Ultimate Dark Reader Adblock Mkpado intrusive ad nkwụnye-na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa nke PC na obi ngwa
N'oge ahụ, Google Chrome bụ ihe nchọgharị kachasị ewu ewu n'ụwa. Ihe karịrị pasent 70 nke ndị ọrụ na-eji ya na-aga n'ihu. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ka nwere ajụjụ banyere ihe dị mma karịa Google Chrome ma ọ bụ Yandex Browser. Ka anyi gbalịa iji ha tụnyere ha ma kpebie onye mmeri. Na mgba maka ndị ọrụ ha, ndị mmepe na-anwa ịmezi oghere nke ndị ntanetị weebụ.
Na-echegharị nchọgharị ahụ? Nchọgharị ngwa ngwa dị mfe! Ọganihu nke Firefox, IE, Opera site na 100%
Ekele ndị niile na-agụ blog! Taa enwere m otu isiokwu banyere ihe nchọgharị - ma eleghị anya usoro kachasị mkpa maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na Ịntanetị! Mgbe ị na-etinye oge dị ukwuu n'ime ihe nchọgharị - ọ bụrụgodị na ihe nchọgharị ahụ anaghị adaba, ọ nwere ike imetụta usoro ụjọ ahụ (oge oge ọrụ ga-emetụta).
Gịnị kpatara nchọgharị ahụ ji kwụsị? Otu esi agba ya
Ezi ụbọchị. Echere m na ọ fọrọ nke nta ka onye ọrụ ọ bụla nwee nchekasị nchọgharị mgbe ị na-eme nchọgharị na ibe weebụ. Ọzọkwa, ọ nwere ike ime ọ bụghị naanị na kọmputa ndị na-adịghị ike ... E nwere ọtụtụ ihe kpatara ihe nchọgharị ahụ ji agba ọsọ, ma n'isiokwu a, m chọrọ ilekwasị anya na ndị kachasị ewu ewu na ọtụtụ ndị na-ezute.
Ihe nchọgharị kacha mma nke 2018
Ezigbo enyi! Ndo na enweghi mmelite ọ bụla na blog ruo ogologo oge, M na-ekwe nkwa imeziwanye ma na-amasị gị na isiokwu ọtụtụ mgbe. Taa m kwadebeere gị ọnụego nke nchọgharị kachasị mma nke 2018 maka Windows 10. M na-eji nke a sistemụ arụmọrụ, n'ihi ya, m ga-elekwasị anya na ya, ma ọ gaghị enwe ihe dị iche maka ndị ọrụ nke nsụgharị Windows.
Akụkọ nchọgharị: ebe ị ga-ele anya na otu esi ehichapụ
A na-echekwa akwụkwọ niile anya na Intanet na magazin nchọgharị pụrụ iche. N'ihi nke a, ị nwere ike mepee nleta gara aga, ọbụna ma ọ bụrụ na ọtụtụ ọnwa agafeela kemgbe oge ịlele. Ma n'oge na-adịghị anya na akụkọ ihe mere eme nke weebụ surfer, a chịkọtara ọtụtụ ndekọ banyere saịtị, downloads, na ndị ọzọ.
Ihe mere saịtị ahụ anaghị emeghe na nchọgharị, ihe ngwọta maka nsogbu ahụ
Enweghị ike ịmeghe akwụkwọ dị mkpa na Ịntanetị bụ otu n'ime nsogbu kachasị emetụta. N'otu oge ahụ na adreesị ụlọ ahụ a na-ahazi aha ahụ n'ụzọ ziri ezi. Enwere ezigbo ajụjụ banyere ihe mere saịtị ahụ anaghị emeghe, nke dị mkpa. Ihe kpatara nsogbu a nwere ike ịbụ ọtụtụ, site na ntụpọ anya ma kwụsị na ọdịda software.
Kedu otu esi mepee taabụ ihe nchọgharị ikpeazụ
Ndewo Ọ ga - adị ka ihe na - abaghị uru - chee echiche banyere imechi taabụ na ihe nchọgharị ahụ ... Ma mgbe obere oge ị ghọtara na peeji nke ahụ nwere ozi dị mkpa nke a chọrọ iji zọpụta maka ọrụ n'ọdịnihu. Dịka "iwu nke ụbụrụ" ị na-echetaghị adreesị nke ibe weebụ, na ihe ị ga-eme? Na nke nta nke a (ntakịrị ntụziaka), M ga-enye ụfọdụ igodo dị iche iche maka ihe nchọgharị dị iche iche na-ewu ewu nke ga-enyere gị aka weghachite taabụ kpuchiri.
Kedu ka esi ehichaa (weghachite) faịlụ ndị agha?
Ezi ụbọchị! Taa, m ga-achọ ikwu maka otu faịlụ (ụsụụ ndị agha) n'ihi na ọtụtụ ndị na-aga na saịtị ndị na-ezighi ezi ma bụrụ ndị na-eme ka ọ bụrụ ndị na-achụ ego. Ọzọkwa, ọtụtụ antiviruses adịghị ọbụna ịdọ aka ná ntị banyere iyi egwu! Ogologo oge gara aga, n'eziokwu, aghaghị m iweghachite ọtụtụ faịlụ ụsụụ ndị agha, na-azọpụta ndị ọrụ site na "ịtụba" na saịtị ndị ọzọ.
Ihe omuma ohuru na Google Chrome 67: ihe ihe nchoputa ahu nwetara mgbe emelite
Ụlọ ọrụ Google na-atụ anya mgbe niile na-ekwupụta mmelite ọzọ nke ngwaahịa ya. Ya mere, na June 1, 2018, usoro nke 67 nke Google Chrome maka Windows, Linux, MacOS na nyocha niile nke oge a hụrụ ụwa. Ndị mmepe ahụ abụghị nanị na mgbanwe dị mma na nhazi na arụmọrụ nke menu, dịka ọ dị na ya, ma nye ndị ọrụ ụfọdụ ngwọta ọhụrụ ma dị iche iche.
Esi chọpụta paswọọdụ na ihe nchọgharị (ọ bụrụ na ị chefuru paswọọdụ site na saịtị ...)
Ezi ụbọchị. Ajụjụ na-adọrọ mmasị dị na aha :). Echere m na a na-edebanye onye ọ bụla Intaneti (karịa ma ọ bụ na-arụ ọrụ) na ọtụtụ ebe (e-mail, netwọk mmekọrịta, egwuregwu ọ bụla, wdg). Ịdebe okwuntughe site na saịtị ọ bụla dị n'isi gị bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya - ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na oge na-abịa agaghị ekwe omume ịbanye na saịtị ahụ!
Google Chrome nyocha data nkeonwe
Google Chrome nyocha data nkeonwe. Mgbochi nje virus a wuru n'ime otu ihe nchọgharị weebụ kachasị ewu ewu na ụwa na-enyocha faịlụ kọmputa. Nke a metụtara kọmputa na sistemụ arụmọrụ Windows. Ngwaọrụ ahụ na-enyocha ozi niile, gụnyere akwụkwọ nkeonwe. Google Chrome nyochaa data onwe onye?